शीत युद्ध समयरेखा
1945 को रूपमा पहिचान गरिएको सबै भन्दा आम मितिहरु संग एंग्लो-अमेरिकन नेतृत्वका सहयोगीहरु र यूएसएसआर को यूएसएसआर को पतन गर्न को लागी युद्ध युद्ध गठबंधन को पतन देखि, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध को पछि मा 'लडाई' थियो। 1 99 1 तिर। धेरै भन्दा ऐतिहासिक घटनाहरू जस्तै, युद्धको वृद्धि भएको बीउ धेरै पहिले रोपियो, र यो समयरेखा 1917 मा विश्वको पहिलो सोवियत राष्ट्रको निर्माणको साथ सुरु हुन्छ।
पूर्व विश्व युद्ध दुई
• अक्टोबर: रूसमा बोल्स्विकिक क्रांति।
• रूसी गृहयुद्धमा असफल सहयोगी हस्तक्षेप।
• मार्च 15: लेनिनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रांतिलाई बढावा दिन कम्युनिस्ट अन्तरराष्ट्रीय (सहिनर) सिर्जना गर्छ।
• डिसेम्बर 30: यूएसएसआरआर निर्माण
• पहिलो पटक यूएसएसआरका साथ संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजनयिक सम्बन्ध सुरु हुन्छ।
• अगस्त 23: रिबेन्टन्ट्रो-मोलोटोभ संक्रमण ('गैर-आक्रामक सम्झौता): जर्मनी र रूस पोल्याण्ड विभाजित गर्न सहमत छ।
• सेप्टेम्बर: जर्मनी र रूस पोल्याण्ड आक्रमण
• जून 15 - 16: एसएसएसआरले एस्टोनिया, लाटविया र लिथुआनियालाई सुरक्षा चिन्ता दिँदै।
• जून 22: सञ्चालन बारबारोससा सुरू हुन्छ: रूसको जर्मन आक्रमण।
• नवंबर: अमेरिकाले यूएसएसआरमा उधार पट्टि शुरू गर्दछ।
• डिसेम्बर 7: पर्ल हार्बरमा जापानी आक्रमणले अमेरिकालाई युद्धमा प्रवेश गर्न सघाउँछ।
• डिसेम्बर 15 - 18: रूसलाई राजनैतिक मिशनले स्टिलिनलाई रिबन्टन्ट्रो-मोलोटोभ सम्झौतामा लाभ प्राप्त गर्न आशा गर्ने आशा गर्दछ।
• डिसेम्बर 12: सोभियत-चेको गठबंधन सहमति भयो; चेक युद्ध पछि एसएसएसआर संग सहकार्य गर्न सहमत छ।
• फेब्रुअरी 1: जर्मनीले सोललिङ विजयको साथ समाप्त गर्यो।
• अप्रिल 27: यूएसएसआरले कटिन नरसंहारको बारेमा आर्गुमेन्टहरूमा पोलिश सरकार-निर्वासनसँग सम्बन्ध बन्द गर्यो।
• मई 15: सोभियत सहयोगीहरूलाई अपिल गर्न कोइन्टिनtern बन्द छ।
• जुलुस: सोभियत विजयको साथ कुर्सकको युद्ध समाप्त हुन्छ, वास्तवमा युरोपको युद्धको मोटो मोड।
• नोभेम्बर 28 - डिसेम्बर 1: तेहरान सम्मेलन: स्टललिन, रोसवेल्ट, र चर्चिल मिलन।
• जुन 6: डी-डे: मित्र राष्ट्रहरू फ्रान्समा सफलतापूर्वक उडेको, दोस्रो चरण खोल्ने जो रुसलाई आवश्यक पर्दा पश्चिमी युरोपलाई मुक्त गर्छ।
• जुलाई 21: पूर्वी पोल्याण्डको 'मुक्ति प्राप्त' भएकोले, रूसले यसलाई शासन गर्न ल्यूबिनमा नेशनल लिबरेशनको समिति गठन गर्यो।
• अगस्ट 1 - अक्टोबर 2: वारसा विद्रोह; पोलिश विद्रोहहरूले वारसामा नाजी शासनलाई पराजित गर्ने प्रयास गरे; रेड आर्मीले पछाडि बस्छन् र यसलाई विद्रोहीहरूलाई नष्ट गर्न कुचल गर्न अनुमति दिन्छ। • अगस्ट 23: रोमीनियाले आक्रमण गरेपछि रूससँग सशस्त्र सेनालाई चिन्ह लगाउँछन्; एक गठबन्धन सरकार गठन गरिएको छ।
• सेप्टेम्बर 9: बुल्गारियामा कम्युनिस्ट कर्तव्य।
• अक्टोबर9- 18: मस्को सम्मेलन। चर्चिल र स्टालिनले पूर्वी युरोपमा 'प्रभावका क्षेत्रहरू' प्रतिशतमा सहमत छन्।
• डिसेम्बर 3: ग्रीसमा ब्रिटिश र समर्थक कम्युनिस्ट ग्रीक सेनाहरूबीच संघर्ष।
• जनवरी 1: यूएसएसआरले उनीहरूको कम्युनिस्ट गुप्तचर सरकारलाई पोल्याण्डमा अनन्त सरकारको रूपमा मान्यता दिएको छ; यूएस र यूकेले त्यसो गर्न इन्कार गरे, लन्डनमा निर्वासित मन पराए।
• फेब्रुअरी 4-12: चर्चिल, रुसेवेल्ट र स्टालिन बीचको याटा शिखर; प्रतिज्ञाहरूलाई लोकतान्त्रिक छनोट गरिएका सरकारहरूलाई समर्थन दिइन्छ।
• अप्रिल 21: कम्युनिष्ट पूर्वी राष्ट्रहरू र यूएसएसआर नयाँ कामको साथमा काम गर्न सम्झौताहरू बीचको सम्झौता।
• 8 मई: जर्मनी समर्पण; युरोपमा दुई विश्वयुद्धको अन्त्य।
1940 को दशकमा
• मार्च: रोमानियामा कम्युनिस्ट-प्रभुत्व विद्रोही।
• जुलाई-अगस्ट: अमेरिकी, यूके, र यूएसएसआर बीचको पदमडम सम्मेलन।
• जुलाई 5: यूएस र बेलायतले कम्युनिस्ट-प्रभुत्व पोलिश सरकारलाई स्वीकार्छ पछि यसलाई सरकार-निर्वासनका केही सदस्यहरूलाई सामेल हुन अनुमति दिन्छ।
• अगस्त 6: अमेरिका हिरोशिमा मा, पहिलो परमाणु बम बन्छ।
• फेब्रुअरी 22: जर्ज केननले लामो टेलिग्राम अधिवेशन समाग्री पठाउँछन्।
• मार्च 5: चर्चिलले आफ्नो आयरन पर्दा भाषण दिन्छ।
• अप्रिल 21: स्टालिनको अर्डरमा जर्मनीमा सामाजिक एकता पार्टी गठन भयो।
• जनवरी 1: एङ्ग्लो-अमेरिकी बिजोन बर्लिन, एनआरएन यूएसएसआरमा गठन गरियो।
• मार्च 12: ट्रममन सिद्धान्तले घोषणा गर्यो।
• जुन 5: मार्शल योजना सहायता कार्यक्रम घोषणा गरियो।
• अक्टोबर 5: अन्तरिम कम्युनिज्मलाई व्यवस्थित गर्न Cominform स्थापित।
• डिसेम्बर 15: लन्डनको विदेश मन्त्रीहरूको सम्मेलन बिना सम्झौता
• फेब्रुअरी 22: चेकोस्लोवाकियामा कम्युनिस्ट कप्तान।
• मार्च 17: ब्रसेल्स सम्झौता बेलायती, फ्रान्स, हल्याण्ड, बेल्जियम र लक्जमबर्गको बीचमा हस्ताक्षर गरिएको छ।
• जून 7: छः पावर सम्मेलनले पश्चिम जर्मन संविधान सभाको सिफारिस गर्दछ।
• जून 18: जर्मनीको पश्चिमी क्षेत्रहरूमा नयाँ मुद्रा प्रारम्भ गरियो।
• जुन 24: बर्लिन ब्लकड्रेड सुरु हुन्छ।
• जनवरी 25: चाउकोन, म्युजिकल आर्थिक सहयोगको लागि परिषद, पूर्वी ब्लक अर्थव्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न सिर्जना गरियो।
• अप्रिल 4: उत्तरी अटलांटिक संधिमा हस्ताक्षर: नाटो गठन।
• मई 12: बर्लिन ब्लकड्रेड उठायो।
• 23 मई: संघीय गणतन्त्र जर्मनी (एफआरजी) को लागि 'आधारभूत व्यवस्था' अनुमोदन गरिएको: बिजनोनले नयाँ क्षेत्र बनाउनको लागी फ्रांसीसी क्षेत्रसँग विलय गर्दछ।
• मे 30: पीपुल्स कांग्रेसले पूर्वी जर्मनीमा जर्मन डेमोक्रेटिक गणतन्त्रको संविधानलाई स्वीकृत गर्दछ।
• अगस्त29: यूएसएसआरले पहिलो परमाणु बमलाई आक्रमण गर्यो।
• सेप्टेम्बर 15: अडिनेउरे जर्मनीको संघीय गणतन्त्रको पहिलो चासो हो।
• अक्टोबर: चीनका कम्युनिस्ट पीपुल्स गणतन्त्रले घोषणा गरे।
• अक्टोबर 12: जर्मन टर्मिनल गणतन्त्र (जीडीआर) पूर्वी जर्मनीमा गठन गरियो।
• अप्रिल 7: एनएससी -68 अमेरिकामा मिसिएको: एक अधिक सक्रिय, सैन्य, कन्टेनरको नीति र सुरक्षा खर्चमा ठूलो वृद्धिको कारणले समर्थन गर्दछ।
• जुन 25: कोरियन युद्ध सुरु हुन्छ।
• अक्टोबर 24: फ्रान्सद्वारा Pleven योजना अनुमोदित: पश्चिम जर्मन जर्मन सैनिकहरू एक युरोपेली डिभिजन समुदाय (ईडीसी) को भाग हुन।
• अप्रिल 18: युरोपियन कोइला र स्टील समुदाय संधिमा हस्ताक्षर गरियो (श्युमन प्लान)।
• मार्च 10: स्टालिनले एकताबद्ध, तर तटस्थ, जर्मनीलाई प्रस्ताव गर्छ; पश्चिमबाट अस्वीकार गर्यो।
• मे 27: युरोपियन डिभिजन सामुदायिक (ईडीसी) संधिले पश्चिमी राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरे।
•5मार्च: स्टालिन मर्छ।
• 16-16-18: जीडीआरमा असामान्य, सोभियत सेनाले दबाब दिए।
• जुलाई: कोरियाली युद्ध समाप्त हुन्छ।
• अगस्त 31: फ्रान्सले EDC लाई अस्वीकार गर्यो।
•5मई: एफआरजी एक सार्वभौमिक राज्य बन्छ; नाटो भेटिन्छ।
• 14 मई: पूर्वी कम्युनिस्ट राष्ट्रहरूले वारसा संधिमा सैन्य गठबन्धनमा हस्ताक्षर गर्छन्।
• 15 मई: अस्ट्रिया कब्जा गर्ने सेनाहरू बीचको राज्य सम्झौता: तिनीहरू हटाउँछन् र यसलाई एक तटस्थ राज्य बनाउन।
• सेप्टेम्बर 20: यूएसएसआर द्वारा एक सार्वभौम राज्यको रुपमा मान्यता प्राप्त जीडीआर। एफआरजीले प्रतिक्रियामा हॉलस्टीन सिद्धान्तको घोषणा गरे।
• फेब्रुअरी 25: खुर्शुचेभले 20 औं पार्टीका कांग्रेसमा एक भाषणमा स्टालिनलाई आक्रमण गरेर डी-स्टललिनिजेसन सुरु हुन्छ।
• जुनः पोल्याण्डमा असामान्य।
• अक्टोबर 23 - नोभेम्बर 4: हंगेरी युप्राइजिंग कुचल।
• मार्च 25: जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स र लक्जमबर्गको संघीय गणराज्यसँग रोमको सम्झौताले युरोपियन आर्थिक समुदायलाई हस्ताक्षर गर्यो।
• नोभेम्बर 10: दोस्रो बर्लिनको संकटको सुरुवात: खुर्श्चेभले दुई जर्मन राज्यहरू सीमाहरू बसोबास गर्न र पश्चिमी राष्ट्रहरूका लागि बर्लिन छोड्नको लागि शान्ति सम्झौताको लागि आग्रह गर्दछ।
• नवंबर 27: खुर्सुचेभद्वारा जारी बर्लिन अल्टिमेटम: रूसले बर्लिनको अवस्था समाधान गर्न र6जना आफ्ना सैनिकहरू हटाउन पश्चिममा6महिना दिन्छ वा यसलाई पूर्वी बर्लिनलाई पूर्वी जर्मनीमा हस्तान्तरण गर्नेछ।
• जनवरी: फिइडेल क्यास्ट्रो अन्तर्गत कम्युनिस्ट सरकार क्यूबामा स्थापित भयो।
• 1 मई: एसएसएसआरले रूसी यूरियामा यूएस यू-2 जासूस विमानलाई पराजित गर्दछ।
• 16-16 -16: पछि यूएस-2 प्रेमीलाई बाहिर निकाल्न पेरिस शिखर बन्द भएपछि।
• अगस्त 12/13: बर्लिन र जीडीआरमा बन्द भएको पूर्व-पश्चिम सिमानाको रूपमा निर्माण बर्लिन वाल ।
• अक्टोबर - नोभेम्बर: क्युबा मिसाइल संकट संसारले परमाणु युद्धको झन्डा ल्याउँछ।
• अगस्ट 5: बेलायती, यूएसएसआर, र यूएस बीचको परमाणु परीक्षणको सीमा परीक्षण। फ्रान्स र चीनले यसलाई अस्वीकार गर्यो र आफ्नै हतियारहरू विकास गर्दछ।
• अक्टोबर 15: खुर्चेचेभले शक्तिबाट हटाइयो।
• फेब्रुअरी 15: यूनानी भियतनामको आक्रमणमा सुरु हुन्छ; 1966 सम्म अमेरिकामा 400,000 अमेरिकी सेनाहरू छन्।
• अगस्त 21-27: चेकोस्लोवाकियामा प्राग स्प्रिंगको क्रश।
• जुलाई 1: यूके, यूएसएसआर र यूएस द्वारा हस्ताक्षरित गैर-प्रसार सम्झौता: परमाणु हतियार प्राप्त गर्न गैर-हस्ताक्षरहरू सहयोग नगर्ने। यो संधि शीत युद्धको समयमा डेलाइटको युग सहयोगको पहिलो प्रमाण हो।
• नवंबर: ब्रेजनेभ सिद्धान्तलाई उल्लिखित।
• सेप्टेम्बर 28: ब्रान्डले फ्रान्स च्याम्पेलर बन्छ, विदेशको रूपमा आफ्नो स्थितिबाट विकसित ओस्टपोलिटिकको नीति जारी राख्छ।
1970 को दशक
• अमेरिकी र USSR बीच सामरिक आर्क्स सीमा वार्ता (SALT) को शुरुवात।
• अगस्त 12: यूएसएसआर-एफआरजी मस्को संधि: दुबै एकअर्काका क्षेत्रहरू चिन्न र सिमाना परिवर्तनको मात्रै शान्तिपूर्ण तरिकामा सहमत हुन्छन्।
• डिसेम्बर 7: एफआरजी र पोल्याण्ड बीचको वारसा संधि: दुवै एकअर्काको पहिचानलाई मान्यता दिन्छ, सीमा सीमा परिवर्तनको मात्र शान्त तरिका र व्यापारमा वृद्धि गर्न सहमत छ।
• सेप्टेम्बर 3: अमेरिका, यूके, फ्रान्स र यूएसएसआर बीच बर्लिनमा चार पावर संधि पश्चिम बर्लिनबाट एफआरजी सम्म पुग्यो र FRG सम्म पश्चिम बर्लिनको सम्बन्ध।
• 1 मई: एसएटीटी म संधिमा हस्ताक्षर गरे (सामरिक आर्म्स सीमा शुल्क वार्ताहरू)।
• डिसेम्बर 21: फ्रान्स र जीडीआर बीचको आधारभूत संधि: FRG ले हेलस्टीन सिद्धान्त प्रदान गर्दछ, जीडीआर को सार्वभौम राज्यको रूपमा मान्यता दिन्छ, दुवैको संयुक्त राष्ट्रमा सीटहरू छन्।
• जून: फ्रान्जी र चेकोस्लोवाकिया बीच प्राग संधि।
• जुलाई: SALT II कुराकानी सुरु
• 1 अगस्त: अमेरिका, क्यानाडा र 33 युरोपेली राज्यहरु सहित हेलसिंकी सम्झौता / अर्डर / 'फाइनल एक्ट' को बीचमा हस्ताक्षर गरियो: सीमावर्तीहरूको 'अयोग्यता' राज्यले शान्तिपूर्ण अन्तरक्रियाको लागि सिद्धान्तहरू प्रदान गर्दछ, अर्थशास्त्र र विज्ञानमा सहयोग मानवअधिकार।
• पूर्वी यूरोपमा सोभियत एसएस -20 माध्यमिक दायरा मिसाइल।
• जुन: SALT II संधिमा हस्ताक्षर गरियो; यूएस सीनेट द्वारा कहिल्यै पुष्टि नगर्ने।
• डिसेम्बर 27: अफगानिस्तानको सोभियत आक्रमण।
• डिसेम्बर 13: पोल्याण्डमा मार्शल कानून एकताबद्ध आन्दोलनलाई कुचाउन।
• जनवरी 20: रोनाल्ड रेगन अमेरिकी राष्ट्रपति बन्छ।
• जूनः जेनभामा सुरु (START को रणनीतिक आर्म्स कमी)।
• पश्चिमी युरोपमा राख्नु पर्सिङ र क्रूज मिसाइलहरू।
• मार्च 23: अमेरिकी 'सामरिक रक्षात्मक पहल' वा 'स्टार वार्स' को घोषणा।
• मार्च 12: गोरबचेव यूएसएसआरआरको नेतृत्व हुन्छ।
• अक्टोबर 2: एसएसएसआर-यूएस सम्मेलन रिक्जेविक मा शिखर सम्मेलन।
• डिसेम्बर: यूएसएसआर-यूएस वाशिंगटनको रूपमा शिखर सम्मेलन: यूएस र एसएसएसआर युरोपबाट मध्य-दायरा मिसाइल हटाउन सहमत छ।
• फेब्रुअरी: सोभियत सेना अफगानिस्तानबाट निकाल्न थाले।
• जुलाई 6: संयुक्त राष्ट्रसंघको भाषणमा गोरबचेवले ब्रेजनेभ सिद्धान्तलाई दोहोर्याउँछ, स्वतन्त्र चुनावलाई प्रोत्साहन गर्दछ र शत्रुहरूको रेस समाप्त गर्छ, ठण्डा युद्धको अन्त्यमा; लोकतान्त्रिकहरू पूर्वी युरोपमा उभरन्छन्।
• डिसेम्बर 8: INF संधिमा, युरोपबाट मध्यम-दायरा मिसाइलहरू हटाउने समावेश गर्दछ।
• मार्चः यूएसएसआरआरमा बहु-उम्मेदवारको चुनाव।
• जूनः चुनाव पोल्याण्डमा।
• सेप्टेम्बर: हंगेरीले पश्चिममा किनारामार्फत GDR 'छुट्ट्याउने' अनुमति दिन्छ।
• नोभेम्बर 9: बर्लिन पर्खाल भत्काउँछ।
• अगस्त 12: जीडीआरले FRG सँग मर्ज गर्न चाहने घोषणा गरेको छ।
• सेप्टेम्बर 12: एफआईजी, जीडीआरद्वारा दुईवटा चार सम्झौता हस्ताक्षरित। यूएस, यूके, रूस, र फ्रान्सले फ्रान्समा पहिलेका कब्जा गरिएका अधिकारहरूको बाँकी अधिकारलाई रद्द गर्दछ।
• अक्टोबर 3: जर्मन पुनःनिर्मित।
• जुलाई 1: आरम्भ संधिमा अमेरिका र यूएसएसआर द्वारा परमाणु हतियार कम गर्न हस्ताक्षर गरियो।
• डिसेम्बर 26: एसएसएसआर भंग भयो।
आयरन चांसलर, ओटो वोन बिस्मिर्क को लाइफ र विरासत
चीनको हान राजवंशको सम्राट
पुय, चीनको अन्तिम सम्राट
फ्युन हट्सहेप्सु मिस्र जीवनी
ठूलो लप फर्वार्ड
हरिकोन्सले के गर्छ?
तपाईंको मनको गुप्त शक्ति तपाई के सोच्नुहुन्छ
चेल्सी मेम्ल्म, विश्व कक्षा जिमिनाको जीवनी
CSUB GPA, SAT र ACT डेटा
किशोरहरूको लागि राशिफल साइन मेषहरू अवलोकन
Pedro de Alvarado को बारे मा दस तथ्य
कसरी डीएनए निकाल्न
चन्द्रमा हिंड्नुहोस् - "शान्त र नृत्य"
राष्ट्रिय ऋण वा संघीय घाटा? के फरक छ?
ओर्बिटलि परिभाषा र उदाहरण
'सेन्टरको कालो भित्ता' - स्टोरी
आजादीको अल्जीरिया युद्धको समय
शीर्ष केटाहरु स्की जैकेट
Santeria मा Ebbos - बलिदान र प्रस्ताव
"राशि" संस्करण "नम्बर"
पाँच जना प्रसिद्ध दास विद्रोहीहरू
प्रारम्भिक ट्री नट ड्रप
ग्रैंड घाटी स्टेट यूनिवर्सिटी प्रवेश
तपाईंको Homeschool मा कार्यभार को मूल्यांकन गर्ने तरिका
ढोका खोलिएको आफ्नो कंधेहरू काम गर्नुहोस्
उत्प्रेरक परिभाषा र कसरी काम गर्छन्
सकारात्मक तथ्याङ्कहरू बदलिंदैमा नकारात्मक विवरणहरूमा अभ्यास गर्नुहोस्
Salish Kootenai College Admission